Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka oo u xumaaday heshiiskii saldhiga militeri ee Berbera - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka oo u xumaaday heshiiskii saldhiga militeri ee Berbera
Ilo lagu kalsoonaan karo aynu ka heleyno diblomaasiyiin Soomaaliyeed ayaa inoo xaqiijiyay in dowladda Imaaraadka Carabta ay ka carootay hadalo dhawaan kasoo yeeray dowladda federaalka Sooomaaliya, kaas oo ku saabsan heshiis ay saldhig militeri ku yeelaneyso magaalo xeebeedka Berbera ee maamulka Somaliland.
Dowladda Imaaraadka ayaa dib u yeertay safiirkeedi u fadhiyay Soomaaliya Maxamed Al-Custhmani, kaas oo maalintii shalay ka dhoofay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho islamarkaana dib ugu laabtay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Safiirka ayaa ka mid ahaa madaxdii lagu casuumay xafladda caleemo saarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo islamarkaana xafladaasi kasoo qeyb-gashay.
Heshiiska saldhigga milateri oo ay dowladda Imaaraadka la gashay Somaliland ayaa keenay inuu xumaado xiriirka u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Imaaraadka, waxaana warar aan la xaqiijin sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay Sucuudiga ka codsatay inay arrintaan soo dhex gasho.
Khilaafkaan u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee diblomaasiyadeed ee dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo ku lug yeelato, iyadoo Imaaraadku saameyn weyn ku leeyahay maamulada ka jira dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, maalmihii ugu dambeeysay ayaa waxaa la hadal haayay in safiirka Imaaraadka u fadhiyay Soomaaliya la bedelay, balse ay arrinta tahay u yeerasho safiir oo dalalka xiriirkoodu xumaado dhexmarta.